Dadkii u ololaynayay Qadiyadda Qalbidhagax oo la amray in la soo xiro. – Hornafrik Media Network
Ciidamadda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa baadi goobaya Muuse Xabad Tafad, iyo Prof Yaxye Sh Caamir oo u ololaynayay Qadiyadda Qalbidhagax in laga dhigo Mid caalami ah.
HornAfrik ayaa ogaatay in Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Taabit Abdi, iyo Taliyaha NISA, C/laahi Sanbaloolshe ay ka wada shaqaynayaan sidii loo soo xiri lahaa Xubno u dhaq dhaqaaqa Arrimaha Bulshadda oo ay ka mid yihiin Muuse Xabbad iyo Prof Yaxye Caamir oo Barre ka ah Jaamacad ku taala Muqdisho, Waxayna Labadan Masuul dhawaan soo bandhigeen Caruurtii uu dhalay Qalbidhagax, iyagoona iclaamiyay Dadka Muqdisho inay isugu soo baxaan Banaanbax ay uga dhiidhinayaan Dhiibistii Qalbidhagax.
Prof Yaxye Caamir iyo Muuse waxay sidoo kale iyagoo la kaashanaya Qareeno Soomaaliyeed diyaarinayeen Dacwad lagu soo oogo Masuuliyiintii ku lug lahaa Dhiibista Qalbidhagax, Waxayna sidoo kale diyaarinayeen Dacwad Caalami ah inay geeyaan Maxkamadda The Hague ee ku aadan Kiiska Qalbidhagax, balse dhaq dhaqaaqooda oo ay ka warheshay NISA ayaa la amray in la soo xiro.
Prof Yaxye iyo Muuse hadda waxay ku dhuumalaysanayaan Muqdisho, iyagoo qatar la galiyay Naftooda, kadib markii Dhalinyaro Dhar Cad oo ka tirsan NISA, horayna uga soo goostay Alshabaab loo qaybiyay Sawiradooda si ay u soo qabtaan.
Taaladda Daljirka Dahsoon oo ay qorshaynayeen inay ka dhigaan Dibadbax looga soo horjeedo Go’aankii Dowladda Somalia ay ku dhiibtay Qalbidhagax ayaa la xiray dhamaan jidadka soo gala, Waxaana la dhoobay halkaasi Ciidamo farabadan.
Qadiyadda Qalbidhagax ayaa noqotay mid kicisay Dareenka Shacabka Soomaaliyeed oo si wayn uga dhiidhiyay. Waxayna Dowladda Somalia isku dayaysaa inay xakamayso Kacdoonadda la xiriira arrintan.
Hirshabelle oo yeelatay Madaxwayne Cusub, kadib doorasho ka dhacday Jowhar.